Ebili mmiri na Spain: oyi na snow na north na northheast nke obodo | Netwọk Mgbasa Ozi
Eketie nte ke enye ididịghe, edi ini etuep edi. Ma ọ bụ kama nke ahụ, ụbọchị ndị kachasị sie ike n'oge oge amalitelarị. Oke oyi na-emetụta anyị ugbu a, ọkachasị peninshula na agwaetiti Balearic, na-ahapụ ụkpụrụ n'okpuru efu na ọtụtụ akụkụ nke mba, nke gbakwunyere na ifufe siri ike nke ruru 80km / h, na-eme ka mmetụta okpomọkụ dị ezigbo oyi.
Enweela otutu ntu oyi na Port nke Leitariegos, Asturias (-13ºC), Medina de Rioseco, Valladolid (-6.8ºC), na Sardón de Duero, Valladolid (-6,1ºC), na Palencia (-4ºC), Sierra de Tramuntana, na Mallorca (-4ºC); na adịghị ike na Ávila (-2ºC), Segovia (-1ºC).
1 Ojiji eji agbụ ígwè dị mkpa n'ọtụtụ ngalaba
2 Ọ nwere ike ịbụ ezigbo snow
Ojiji eji agbụ ígwè dị mkpa n'ọtụtụ ngalaba
Mmiri oyi na-ahapụ ala nke akụkụ dị mma nke mba ahụ kpuchie na snow, nke na-eme ka ebuba ụdọ n'ọtụtụ ngalaba iji zere nsogbu, dị ka ebe ndị a:
Ọdụ ụgbọ mmiri Asturian: San Isidro, nke dị na Aller; Tarna, Ọ bụrụ na; Somiedo na Puerto de San Lorenzo, na Somiedo, na ọdụ ụgbọ mmiri Ventana na Teverga.
Gzọ burgos: BU-571, na Río de la Sía, na Bu-572, nke dịdewere Río de Lunada.
Adszọ nke León: LE-233 n'etiti Boca de Huergano na Besande, na LE-473 dị nso na Pola de Gordón, na LE-481 n'etiti San Emiliano na Torrebarrio, na LE-495 n'etiti Cabrillanes na Meroy, na LE- 497 n'etiti Villalbino na Caboalles de Abajo.
Ọ nwere ike ịbụ ezigbo snow
Maka ụbọchị ole na ole sochirinụ, ụdị ndị ahụ na-egosi nke ahụ Ọ nwere ike sno na ọkwa dị n'okpuru 200 mita karịa ọkwa mmiri, ọkachasị site na echi na Wenesde, nke ga-abụ ihe pụrụ iche na-eche na mmiri anaghị ezokarị n'ụdị snow n'ebe dị ala.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ebili mmiri oyi » Ebili mmiri na Spain: okpomọkụ dị n'okpuru efu na snow na ugwu na ugwu ọwụwa anyanwụ nke mba ahụ
Ọnọdụ akụ na ụba nke Spain ọ kwadebere maka mgbanwe ihu igwe?